कलियुगका कुरा: May 2012
संविधानसभा भंग पछिको बाटो
कहिलेकाहीँ स्थिति कसैको पनि काबुमा हुँदैन र कसैले नचिताएको कुरा हुन जान्छ। संविधानसभा भंग पनि नेपालमा त्यस्तै हुन गयो। हुनुपर्ने /नहुनेपर्ने जे जे भए पनि समयले कसैलाई पर्खदैंन। त्यसैले फेरि भविष्यलाई कसरी लाने भन्ने योजनामा लागिहाल्नुपर्छ। संविधानसभा भंग भएपनि अब हामी समक्ष दुई वटा बाटा छन्।
मिलेर जाने र अर्को नमिलेर जाने।
अब मिलेर जाने हो भने प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको अगुवाईमा सर्वदलीय छलफल हुनुपर्छ। छलफलपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजिनामा दिनुपर्छ। प्रमुख दलहरुकै सहभागितामा नयाँ सहमतिको सरकार बन्नुपर्छ र त्यो भट्टराईकै कै नेतृत्वमा भए पनि हुन्छ नभए अरु कसैको। र, त्यसले सहमतिको आधारमा संविधानसभा निर्वाचनको नयाँ मिति (यही मिति मंसिर ७ गते बिहीबार पनि हुनसक्छ) घोषणा गरी चुनाव गराउनुपर्छ।
नयाँ चुनावका लागि निर्वाचन सम्बन्धी कानूनहरु बनाउनुपर्नेछ। नभए नयाँ मतदाताले मतदान गर्न पाउँदैनन्। कति सदस्यीय संविधानसभा निर्माण गर्ने र त्यसले संविधान निर्माणका लागि कति लामो समय पाउने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्नेछ।
चुनावले जनतालाई बलियो बनाउँछ। मतदाताहरु पक्कै सचेत छन् र आउने चुनावमा केही नेताहरुलाई छानीछानी पराजित गर्नेछन्। बरु सबैको ध्यान निर्वाचन निष्पक्ष गराउने र निर्धक्क भएर मत खसाउन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ हुनुपर्छ।
तर डर त नेताहरु नमिलेर जालान्, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच शक्ति संघर्ष होला। चुनावको घोषणा गर्ने तर जातीय वा क्षेत्रीय नाममा साम्प्रदायिक हिंसा फैलाएर देशको कुभलो चिताउनेको मनोकामना पुरा गरिदेलान् भन्ने छ।
कति आशावादी हुन् सभासद्
सान्त्वना प्रकट गर्न एक जना सभासदलाई फोन गरेको उल्टो सम्झाए, 'बिर्सेउ र भाइ! पहिले पनि शेरबहादुर देउवाले भङ्ग गरेको प्रतिनिधिसभा आन्दोलन गरेर पुनः स्थापना भाथ्यो। अहिले आत्तिहाल्न पर्दैन भोलिपर्सी फेरि पुरानै संविधानसभा पुनःस्थापना गर्न पर्यो भनेर आन्दोलन हुनसक्छ।' राजनीतिको कुरा, के पो असंभव छ र अझ फेरि हाम्रो छिट्टै पुराना कुरा भुल्दिहाल्ने र माफी दिने बानी छ। अनि कति आशावादी हुन् यी सभासद्।
सगरमाथा चढेर संविधान नआउने रैछ
ई..... सगरमाथा चढेर त शान्ति र संविधान नआउने रैछ भो। (नोट: प्रचण्ड पुत्र प्रकाश दाहाल शान्ति र संविधानका लागै भन्दै सगरमाथाको आरोहण गरे। तर पनि यता भने संविधान आएन।)
संविधान आउँदैन भनेर त मैले त सुरु मै भनेको थिएँ नि
अब फेरि कति जना उडन्ते विश्लेषकहरुको भनाइ सुन्न पर्ने भयो 'मैले त सुरु मै भनेको थिएँ नि यो संविधानसभाले संविधान दिनै सक्दैन भनेर।' तर मलाई थाहा छ ती तिनै विश्लेषकहरु हुन् जसले पाँच वर्ष अगाडि संविधानसभाको चुनाव नै हुँदैन भन्थे र तिनैले ४ वर्ष अगाडि गणतन्त्र आउनै सक्दैन भन्थे।
कहिलेकाहीँ त त्यस्ता भविष्यवाणी मेरो छिमेकी ज्योतिषले गरेको नि मिल्छ। जो अन्त कहिँ काम नपाएपछि ३ महिने एउटा ज्योतिषको संगत गरेर फर्केर त्यही काम गरिरहेका छन्। उनले प्रायलाई एउटै भन्छन् - तपाइको मन चञ्चल रहेछ। केही कुरामा थिर भएर बस्दो रहनेछ। मनमा कुरा खेलिरहनेरहेछ।
सभासदहरु प्रति दया लागेर आयो
जीन्दगानीमा सभासदहरु प्रति साह्रै दया लागेर आयो अहिले ठ्याक्कै संविधान सभाको मृत्यु भएको अवस्थामा। बिचराहरुले संविधानसभा मृत्युको खवर पनि रेडियो र टिभी सुनेर थाहा पाउनुपर्ने भो। कमसेकम संविधानसभा अध्यक्षले सभासदहरुलाई बोलाएर बैठकमा बोल्न मन लाए जति बोल्न दिनुपर्ने थियो।
संघीय प्रदेश बनेपछिको बन्द
महिनौं दिनका बन्दबाट वाक्क भएका मोफसलका नेपालीहरुले भोलिपर्सी संघीय प्रदेश बनेपछि आ-आफ्नो प्रदेशमा बन्द गर्न नपाइने र बन्द गर्नै गरी केही माग गर्न परे केन्द्रीय राजधानी गएर त्यहीं बन्द गर्नेपर्ने नियम बनाउलान्। भविष्यको नेपाल...
जान्नेले संघीयताबाट पनि पैसा कमाउँदै छन्
ए! संघीयताको बिबादमा अहिले कतिले त पैसा पो जम्मा पारिरा' रैछन्। बहिनीको गाउँबाट फोन आयो - गाउँलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउन आन्दोलन गर्ने भन्दै घरघरबाट पाँच/दश हजार रुपैया उठाइरहेका छन् रे। अन्तका बजारहरुमा पनि प्रादेशिक राजधानी बनाउने भन्दै जान्नेले कति कति पैसा उठाइरहेका छन् होला? अझ प्रदेशै बनाउनका लागि आन्दोलन भन्दै पनि पैसा जम्मा गरिराका होलान्। आखिर राजधानी आफ्ना गाउँ/बजारमा होस् भन्ने मन कसलाई हुन्न र? रोगडा भेला पार्ने अनेक अनेक उपाए निकाल्छन् केटाहरु...
नेता बोलीमा एकछिन पनि अडिग हुन्नन्
आजभोलि फेसबुक भन्दा टि्वटर https://twitter.com/#!/dipakbhattarai चल्तीमा छ जस्तो छ। एकजनाले त्यसमा लेख्याथे: 'माधव नेपालले पहिलोपटक कुनै शिर्ष नेताका बारेमा टिप्पणी गर्दै सत्य बोलेका थिए त्यही नि फेरि २४ घन्टा नहुँदै माफ मागेछन्।' नेताहरु गतिलो कुरामा त एकछिन पनि टिक्नै सक्दैनन् किन हो? (हास्नुपर्ने कारण धेरै छन् हा हा हा....)
बन्दको रोग त पत्रकारमा पनि सरेछ
पत्रकारहरु माथि आक्रमणको विरोध भन्दै मंगलबार बुटवलका पत्रिका र एफएममा समाचार बन्द भयो। बुधबार र बिहीबार झापाबाट प्रकाशित हुने पत्रिका बन्द गर्ने निर्णय भएछ। बन्दको रोग त पत्रकारमा पो सरेछ...
मायाले अगाडि बन्द
मेरो घर छेउ बस्ने लैलालाई भेट्न एकजना मजनु RAV4जिपमा आइरहन्छन्। कान्छीलाई महिनाको १२ हजार रुपैयाँ पर्ने फ्ल्याट लिएर भाडामा राखेको भनेर कानेखुशी हुन्छ छिमेकमा। आजको यस्तो बन्दको (प्रेस र एम्बुलेन्सलाई पनि नछाडेका) दिन पनि उनी जिप लिएरै आए। नतमस्तक भएँ प्रभु....
११ प्रदेशले मर्का पर्ने भो
यो सहमति भयो भनिएको ११ प्रदेशको प्रस्तावले त मलाई साह्रै मर्का पर्ने भो। घर छ नवलपरासी जिल्लाको पहाड डेढगाउँमा। नुन तेल र बिहेबारीको सामान लिन तनहुँ र पोखरातिर पाइपर्छ। अहिले नवलपरासी जिल्लालाई बाँके-बर्दीयासँग लगेर जोडदिएछन्। जिल्ला सदरमुकाम परासी जान भन्दा अहिले त काठमाडौं आउन नजिक छ। भोलिपर्सी प्रदेशको राजधानी दाङ वा नेपालगञ्ज पुर्याए भने झन् के हाल हुनेहोला। यति बोलुँ संघीयता बिरोधी भन्देलान्। नबोलुँ आफूलाई मर्का परेको कुरो।
शुभकामना हजुर्बा .
अफिस आउँदा चक्रपथ परिक्रमा गर्ने बसको मसँगैको सिटमा अमेरिकामा ९ वर्ष काम गरेर फर्केका ७१ वर्षीय युवा भेटिए। वनस्थली घरमा एक्लै बस्दा दिक्क लागेर रिङरोडको बस यात्रामा निस्केका। उनको सर्टकर्ट कुरा: 'श्रीमती जेठो छोराको परिवारसँग अमेरिकामै बस्छु भनी, आउनै मानिन। कान्छो छोरा अमेरिकामै जर्मनी केटी बिहे गरेर जर्मन तिर लाग्यो। छोरी युकेको ज्वाइसँग उतै छे। मलाई उता बस्नै मन लागेन, म त यो उमेरमा एक्लै परें, त्यसैले अर्की बिहे गरौं कि भनेको अरुले जे सुकै भनोस्।' शुभकामना हजुर्बा ..
अर्को चुनावमा केही नेतालाई हराउनैपर्नेछ
‎'मिसप्लेस' भएको नागरिकता भेटिएपछि भोटर कार्ड बनाउनका लागि काठमाडौं निर्वाचन कार्यालय गएको थिएँ। मान्छेहरु दुई तीन घन्टा लगाएर लाइनमा बसी फोटो खिचाइरहेका थिए। एकजनालाई सोधें, नेपालीलाई अझै राजनीतिबाट वाक्क ला'रैनछ हगि। उनले भने, 'अर्को चुनावमा केही नेतालाई हराउनैपर्नेछ त्यही भएर भोट हाल्नु पर्नेभो।'
तिनी कुन जिल्ला कुन क्षेत्रका मतदाता भनेर सोध्नै बिर्सेछ। कसलाई हराउन खोजेका रैछन् कुन्नि ?
कति लामो होला राष्ट्रपतिको मतपत्र
‎'राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन कति उमेर चाहिने गराए कुन्नि?' एक जनाले सोधेका। पहिलो प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन मन छ अरे हारेपनि। यसो सोचिरहेको, जो पनि उम्मेदवार हुन पाउने अवस्थामा कति लामो हुन्छ होला राष्ट्रपतिको मतपत्र। देशभरीमा मिनिममै पाँच सय जना त राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन खोज्लान् नि।
कत्रा ढुङ्गा हुन् खानामा?
कत्रा ढुङ्गा हुन् खानामा? शहरमा मान्छेले चामलमा हाल्ने सेता ढुङ्गा र दालमा हाल्ने दालको रङ अनुसारको कालो/रातो ढुङ्गा- माटोको कारखाना नै खोलेर पनि व्यापार गर्छन् कि के हो? ...दाँत धन्नै भाँचिएन।
प्रदेशको राजधानीका लागि कति मारमुङ्ग्री पर्ने होला?
एउटा अस्पताल होस् कि विश्वविद्यालय वा रंगशाला नै किन नहोस् कुनै क्षेत्रमा पर्दा त यो र त्यो ठाउँमा भन्नेमा बिबाद गरी बन्द प्रदर्शन हडताल आयोजना गरेर दुई चार जनाले ज्यान फाल्ने हामीहरुलाई भोलिपर्सी साँच्चै राज्य बाँडेर दिए भने यो ठाउँमा र त्यो ठाउँमा राजधानी चाहियो भनेर कति जनाले ज्यान फालिन्छ होला ? आजभोलि वीरगञ्ज र विराटनगर मा त प्रादेशिक राजधानी चाहियो भनेर आन्दोलन हुन थालिसक्यो।
अखण्ड सुदुरपश्चिमै भइहाले पनि त्यहाँ राजधानी धनगढी, महेन्द्रनगर, दीपायल कि डडेल्धुरा कहाँ राख्ने भनेर कति मारमुङ्ग्री पर्ने हो फेरि।
सञ्चार माध्यममा विभत्स भिडियो र फोटो
जापानमा पोहोर आएको सामुन्द्रिक आँधीले २० हजार भन्दा धेरैको ज्यान गयो तर कुनै पनि जापानी मिडियाले एउटा पनि शव देखाएन रे। हाम्रोमा हिमपहिरोपछि सेती नदीमा आएको बाढीबाट मृत्यु हुनेको ३० जना जतिको शब भेटिएको छ। तर फेसबुक, वेवसाइट र टिभीमा शब देखाउनेकै होड छ।
प्राकृतिक विपद्‍मा परेर बितेका तिम्रो साथी, दाजु-भाइ, दिदी-बहिनी, आमा-बाबु वा इष्टमित्रको क्षतविक्षत शब फेसबुकका वाल, टिभी र पत्रिकाभर आएको तिमीलाई मन पर्छ? तिमीलाई आफ्नो आफन्तको क्षतविक्षत शबको चित्र मन पर्दैन भने अरुलाई पनि मन पर्दैन।
माओवादीका नारायणकाजी, मधेशी मोर्चाका गच्छदार र काँग्रेसका सिटौला उपप्रधानमन्त्री भइसके। अहिले घुर्क्याए नि एमाले सरकारमा गए भने उप प्रधानमन्त्री चार जनाको हुने पक्कै भो। अझ साना दलहरु पनि सरकारमा जाने भए भने पाँच जना उपप्रधानमन्त्री हुने भए। दलहरुले सहमतिको मन्त्रिमण्डल होइन उपप्रधानमन्त्रिमण्डल पो बनाउने सहमति गरेका रैछन् क्याहो ?
अफिस आउनासाथ हानिदैं कोठाँ आएर साथीले सुरुमै पत्रिका मागे र राशीफल हेरे, किन हो भनेर सोधेको आज लाइनमा नबसी पेट्रोल पाए रे। हाँस्नुपर्ने कारण धेरै छन् हा हा हा...